Dagaal culus oo ka dhacay Mahadaay | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal culus oo ka dhacay Mahadaay
Dadka degaanka ayaa u sheegay KON in dagaalka uu ahaa mid culus oo saacado badan qaatay.
MAHADAAYA, Soomaaliya - Ciidanka dowladda ayaa iska caabiyay weerar xoog leh oo Kooxda Al-Shabaab maanta kusoo qaadey Bar-koontarool oo ku yaalla duleedka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dadka degaanka qaarkooda oo KON la hadlay ayaa sheegay in Ciidanka dowladda looga dilay dagaalka ugu yaraan labo askari qaar kalena laga dhaawacay, iyadoo dhanka Al-Shabaab uu jiro khasaaro intaas ka badan, balse aan la shaacin.
Saraakiisha Ciidanka ayaa sheegay in weerarka gaadmada ah ay iska caabiyeen, islamarkaana ay dileen tiro aad u badan oo dagaalyahanno iyo hogaamiyeyaal isagu jira, iyadoo hubkooda laga furtay.
Wararka KON helayso ayaa sheegay in Al-Shabaab ay u suurta-gashay inay mudo kooban la wareegto gacan ku heynta barta koonatarool oo laga ilaaliyo degmada Mahadaay, HirShabeelle katirsan.
Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada xili dalka ay ka jirta xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashada dib loo dhigay, waxayna Kooxda Todobaadkan horaantiisa weerartay Bariire iyo Awdheegle, oo Shabeellaha Hoose kamid ah.